Homeसमाचारइण्डियन आइडल सिजन १२ का जज कस्ले कति लिन्छ पारश्रमिक ? नेहाले एक एपिसोडकै यति लिन्छिन् हे’र्नुहोस्
May 6, 2021 admin समाचार 1249
इण्डियन आई’डल सिजन १२ अहिले टेलिभिजनमा चलेको एक रियालीटि शो रहेको छ । कैयौ जबरज’स्त गायन क्षेत्रका ब्यत्तित्वहरु यस कार्यक्रमको एक हिस्सा’को रुपमा जोडि रहने गरेका छन् ।
शो का प्रति’योगि अरुणिता कांजीलाल, पवनदीप राजन, सवाई भट्ट लगायतको सुरीलो आवाजले धेरैको मन जित्न सफल भएको छ । यस शो को होस्ट आदित्य’नारायणले गरिरहेका छन् । त्यस्तै जजहरुमा नेहा कक्कड, बिशाल ददलानी तथा हिमेश रेश’मिया रहेका छन् । आज हामी यिनै जज तथा होस्ट’को एक एपिसोड बराबरको पारश्रमिक कति रहेको होला अन्दाज गर्न सक्नु हुन्छ ?
हो आज हामी उनीह’रुको एक एपिसोड बराबरको पारश्रमिकका बारेमा जानकारी दिदैछौ । बलिउडमा बिकाउ आ’वाज नेहा कक्कडको रहेको छ । उनले यो शो मा सबै’भन्दा बढि पारश्रमिक लिने गरेकि छिन् ।
उनले एक एपि’सोड बराबर ५ लाख भारतीय रुपैया लिने गरेकि छिन् । त्यस्तै बिशाल ददलानीले एक एपि’सोडको साढे ४ लाख र हिमेश रेशमियाले ४ लाख लिने गरेका छन् । जजका अलवा कार्यक्रमलाई होस्ट गर्ने आ’दित्यले एक एपसिोड बराबर साढे २ लाख रुपैया लि’ने गरेका छन् ।
यो पनि पढ्नुहोस्, कौन बनेगा करो’डपति सबैको मनपरेको गेम शो रहेको छ । हरे’क बर्ष यस शो को ब्यग्र प्रतिक्षामा हुन्छन् करोडौ दर्शकहरु । यहि शो मार्फत आफ्नो भाग्य समेत बद’ल्ने गरेका छन् ।
कोरोनाको महा’मारीका बेला फिल्म तथा टेलि’भिजन सिरिजले मान्छेहरु’लाई अलि सहज समेत बनाएको छ । यहि बेला अर्काे खुशीको खबर आएको छ ।
मनोर’ञ्जनलाई अझै बढाउनका लागि चाँडै अमि’ताभ बच्चन कौन बनेगा करोडपति केबी’सी लिएर आउने भएका छन् । सोनी च्यानलले इन्ष्टाग्राममा एउटा भिडि’यो शेयर गर्दै केबीसीको १३ सिजन यहि मे १० तारिख बाट आउने जान’कारी दिएको छ । ओएस नेपालबाट
March 20, 2021 admin समाचार 1704
शनिवारदेखि नेपाल टेलिभिजनबाट प्रसा’रण भइरहेको ‘दोहोरी च्याम्पियन’ औपचारीक रुपमा सुरु नहुँदै विवा’दित बनेको छ । ‘दोहोरी च्याम्पियन’ को पहिलो एपिसियोड नै आलो’चना नै आलो’चनाले भरिएको छ । हजारौँले दिएको डिजिटल अडि’सनबाट छनोट भएका ३५ टिमको
October 30, 2020 admin समाचार 6136
निर्माता छवि ओ’झाले चलचित्र ‘कस’ले चोर्‍यो मेरो मन-२’ बनाउन लागेका छन् । रिली’जको दश बर्षपछि ओझाले ‘कसले चोर्‍यो मेरो मन-२’ बनाउन लागे’का हुन् । दश बर्ष अघि फिल्म’मा रेखा थापा र आर्यन सिग्दे’लले अभिनय गरेका
ह्वेल माछाले निलेर – फेरि ओकलिदिएका एक अमेरिकीको अद्भुत कथा
June 13, 2021 admin समाचार 768
समुन्द्रमा झिँ’गे माछा सङ्कलन गर्ने काम गर्दै आएका माइकल प्याकर्डले आफूलाई कसरी ह्वेलले नि’लेपछि फेरि बच्न सफल भए भन्ने पत्रकारहरूलाई ब’ताएका छन्। संयुक्त राज्य अमे’रिकाको म्यासाचुसेट्सको प्रोभिन्सटाउन शहर नजिकै समुन्द्रमा गोता लगाइ’रहेका बेला विशाल जीव